November 22, 2021 - Amawpyay
Relationship တစ်ခုမှာ Respect မရှိရင် အလကားပဲ
Relationship တစ်ခုမှာ Respect မရှိရင် အလကားပဲ Relationship တစ်ခုမှာ Respect မရှိရင် အလကားပဲ ပို့သမျှ စာတွေကို အလေးအနက်ထားပြီး မပြန်တာ အလုပ်ရှုပ်နေ ရင်လည်း ရှုပ်တယ် မပြောပဲ ပစ်ထားတာ ကိုယ်က စာတွေ ပို့နေရင်လည်း အလေးအနက် ထားပြီး မဖတ်တာ ပြောနေတဲ့ စကားတွေကို ဖြတ်ပြောတာသူလည်း သူအဆင်ပြေ သလိုနေ ငါလည်း ငါအဆင်ပြေ သလိုနေ မယ် ဆိုပြီး နေချင်သလိုနေတာ ချစ်နေရုံလေးနဲ့ တင်ရပြီလေ ဘာလိုသေး လို့လဲ ဆိုပြီး ပေါ့ပျက်ပျက်နေ တာ ချစ်သူမကြိုက်တာတွေ စိတ်မကောင်းဖြစ်စေ ရမှာတွေ လုပ်တာ ဒါတွေအားလုံးဟာ Respect မရှိတာပဲ …
ကိုယ့်ချစ်သူကို အထာတွေလာပေးနေရင် ဖြေရှင်းနည်း(၄)မျိုး
ကိုယ့်ချစ်သူကို အထာတွေလာပေးနေရင် ဖြေရှင်းနည်း(၄)မျိုး ကိုယ့်ချစ်သူကို လာကြံနေသူ၊ခေတ်စကားနဲ့ ဆို ရင်တော့ ၀င်ပြီး စနိုက်ကြော်ဖို့ လုပ်နေတဲ့ မိန်းကလေး ရှိနေတယ် ဆိုရင် ဘာလုပ်သင့်လဲ.? မိန်းကလေးဆိုတာ အူတို၊သ၀န်တိုတတ်တဲ့ အမျိုးပါ။ ဒီလိုကြုံလာရင်တော့ သေချာပေါက် သ၀န်တို၊ စိတ်မချတော့ပဲ ပျာယာ ခတ်နေမိမှာပါ။ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်တဲ့ စိတ်၊စိတ်ပူ သ၀န်တိုစိတ်၊ ၀မ်းနည်းစိတ်တွေဖြစ်နေ မိမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ ကြုံလာရင် ဘယ်လို တွေ၊လုပ်သင့်တယ်၊ မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာကို အနည်းငယ် အကြံပြုပေး ပါရစေ။ ထိပ်တိုက်မတွေ့ပါနဲ့ တစ်ကိုယ်တော် စိတ်ဆိုးပါ၊ဒေါသ ထွက် ပါ။သံသယစိတ်နဲ့ ချစ်သူကို ပြဿနာ ရှိတာ၊အဲ့ဒီမိန်းကလေးကို သွားပြော တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ ခက်ခဲမှန်းသိပေ မယ့် …
အင်္ဂါ သားသမီးတို့၏ စိတ်နေစိတ်ထား
အင်္ဂါ သားသမီးတို့၏ စိတ်နေစိတ်ထား အင်္ဂါတွေဟာ အပြင်ပန်း သဏ္ဍန်တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာ နဲ့နေတတ်ကြပေမဲ့ အင်မတန် မှဒေါသကြီးတဲ့ နေ့နာမ်တွေဖြစ် ကြတယ် မဟုတ်ရင် မခံချင် ကြဘူး။ ဒေါသဖြစ်ရင် အပြင်မှာပေါက်ကွဲ ကြတာထက် ပါးစပ်က ပူညံပူညံ နဲ့ရေရွတ်နေ တတ်ကြ တယ်လူတွေ အပေါ် ဖော်ရွေစွာနဲ့ ခင်မင်တတ်ပါတယ် ဝတ္တရားပျက်ကွက်မိ ရင်လည်း အပြန်ပြန် အလှန်လှန်တွေးပူနေ တတ်ကြ တယ်။ မိသားစုတွေ အပေါ်မှာ ပျော်ရွှင်မှုတွေပေးချင်တဲ့ စိတ်တွေ ရှိကြတယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေမဲ့ တခါတလေ မိသားစုထဲမှာ ပေါကြောင်ကြောင် နိုင်တတ် ကြတယ်။ အလုပ်လုပ် တဲ့နေရာမှာသူများအပေါ်ဦးဆောင်လိုတဲ့ စိတ်ရှိ တယ်။ ကိုယ်လုပ်ရင် ကိုယ်အကောင်းလို့ထင်မြင် တတ်ကြတာ အင်္ဂါ …
ကိုယ် ဆိုတဲ့ဖြစ်တည်မှုလေးကိုပဲ တကယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ တွေ့နေပြီဆိုရင်…
ကိုယ် ဆိုတဲ့ဖြစ်တည်မှုလေးကိုပဲ တကယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ တွေ့နေပြီဆိုရင်… ကိုယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်တည်မှုလေးကိုပဲ တကယ်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့သူနဲ့ တွေ့ပြီးပြီလား။ တကယ်လို့များ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ အဲ့လိုလူနဲ့တွေ့ဆုံရတယ်ဆိုခဲ့ရင်… (၁) တစ်ချိန်ချိန်မှာ သူ့စိတ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့ သိထားပါ …. ။ လူ့စိတ်ဆိုတာ အစိုးမရဘူးမဟုတ်လား။ ကိုယ့်ကို အခုနေချစ်နေပေမယ့်၊ နောက်တစ်နှစ် လောက်နေရင် ချစ်ချင်မှချစ်နေတော့မှာ။ အဲ့ဒီတော့။ သိပ်ပြီး ပျော်မနေပါနဲ့။ (၂) သူ့ကို အနိုင်မယူပါနဲ့ … ။ ချစ်တာက ချစ်တာပါပဲ။ ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်တဲ့သူ ဖြစ်ပါစေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ အချစ်ဆုံးပါ။ အခုလက်ရှိ အချိန်မှာသာ ချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့် အလျော့ပေးနေတာ။ တဖက်သတ်ကြီးပဲ အလျော့ပေးနေရပြီး၊ အနိုင်ကျင့်တာပဲခံနေရမယ်ဆိုရင်၊ အချိန်အကြာကြီး ဆက်ချစ်နေနိုင် မယ်လို့ ထင်ထားလား။ မှားမယ်နော်။ …
တိတ်တဆိတ် စိတ်ဓါတ်ကျနေသူများတွင် တွေ့ရသည့် လက္ခဏာများ
တိတ်တဆိတ် စိတ်ဓါတ်ကျနေသူများတွင် တွေ့ရသည့် လက္ခဏာများ လူတစ်ယောက်မှာ စိတ်ကျရောဂါရှိ၊ မရှိကိုတော့ အလွယ်တကူခြေရာခံ လို့ရနိုင် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း လူတစ်ယောက်မှာ တိတ်တဆိတ် စိတ်ဓါတ် ကျတဲ့ စိတ် ရှိနေ၊မနေ ဆိုတာကိုတော့ အလွယ်တကူ သိလို့ မရနိုင် ပါဘူး တကယ်လို့ တစ်စုံတစ်ယောက်မှာ တိတ်တဆိတ် စိတ်ဓါတ်ကျနေ၊ မနေဆိုတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ.? သိခဲ့ရင်ရော ဘယ်လို ကူညီပေးနိုင်မလဲ.? (1) ရွှင်လန်းတက်ကြွတဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်ရှိနေသူ စိတ်ဓါတ်ကျနေတာမျိုးကို ရွှင်လန်းတက်ကြွတဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက် ရှိနေသူတွေထံမှာ တွေ့နိုင်ဖို့ အရမ်းကို ခက်ခဲပါ တယ်လို့ Rochester Medical Center တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီတွေက ပြောပါတယ်။ မိမိရဲ့အတွေးနဲ့ စိတ်ခံစား …
ချစ်သူနဲ့ ရန်ဖြစ်နေချိန်မှာ ကောင်လေးတွေ ပြောသင့်တဲ့ စကား (၈) ခွန်း
ချစ်သူနဲ့ ရန်ဖြစ်နေချိန်မှာ ကောင်လေးတွေ ပြောသင့်တဲ့ စကား (၈) ခွန်း အငြင်းပွားနေကျ ပုံစံတွေကို ပြောင်းလဲ ပစ်လိုက်ပါ။ ချစ်သူနှစ်ဦး ပြသနာတွေ တက်တဲ့အခါတိုင်း၊ အငြင်းပွားရတဲ့ အခါတိုင်း ဒီနည်းလေးတွေ အတိုင်း ပြောကြည့် ပါ။ ဒါ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အနိုင် ရစေမယ့် နည်းတွေပေါ့၊ ၁။ ကိုယ်ပြောချင် တာလေးကို သဘောပေါက်အောင် ကြိုးစားပေးပါ ။ ကိုယ်ပြောချင် တာကို ဂရုတစိုက် နားထောင်စေ ချင်လို့ ပြောတာမှန်း တစ်ဖက်လူသိပါတယ်။ သူပြောတာကိုလည်း အရေးတယူ ပြန်နားထောင်ပေး ဖို့တော့ လိုပါ တယ်။ ၂။ ဒီကိစ္စမှာ ကိုယ့်ဘက် ကလည်း တာဝန် ရှိမှန်း …
အဖေတစ်ယောက် သမီးဆီသို့ ရေးပို့ခဲ့သည့် စာ
အဖေတစ်ယောက် သမီးဆီသို့ ရေးပို့ခဲ့သည့် စာ သင်၏ သားသမီးများ ကိုလည်း ပေးဖတ်ပါ။ ဤစာကို ဟောင်ကောင် နံမည်ကြီး တီဗွီ ချယ်နယ် တွင် အသံလွှင့်သူ လည်းဖြစ် ခလေး စိတ်ပညာဆိုင်ရာ ပါရဂူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်သော ဖခင်တစ်ယောက်မှ သူ၏ သမီး ဖြစ်သူထံသို့ ရေးသားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ စာပါ အကြောင်းအရာများသည် အသက်ကြီးသည်ဖြစ်စေ ငယ်သည်ဖြစ်စေ သားသမီးဖြစ်စေ မိဘဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် အကြုံးဝင်ပါသည်။ မိဘများမှ သားသမီးများကို ဆုံးမသည့် အခါ အဆိုပါ အကြောင်းအရာများကို ပြောဆိုသင်ကြားပေးသင့်ပါသည်။ သမီးရေ ဖေဖေဒီစာကို ရေးလိုက်တာ အကြောင်း အရင်း၃ခုရှိပါတယ်။ ၁။ ဘဝရယ်၊ ကံကြမ္မာ …
အိမ်စောင့်နတ်၊ ကိုယ်စောင့်နတ်တောင် ဒီဂါထာရွတ်ရင် မနေနိုင်တော့ပဲ ဖြည့်ဆည်းပေးရတဲ့ ဂါထာ သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာလေးအကြောင်းမသိသူတွေအတွက်ဗဟုသုတအဖြစ်ပြောချင်ပါတယ် သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်က၂၇ခေါက်ကျော်ရင်အိမ်စောင့်နတ်၊ကိုယ်စောင့်နတ်တောင်နေမရတော့ပါဘူးတဲ့နော်…. ပြိတ္တာကတော ဂါထာအစကြားတာနဲ့တစ်ချိုးတည်းလစ်ပြေးပါတယ်၊ကျောင်းထိုင်ပြတ္တာကြီးတွေအခြားဂါထာတွေပရိတ်တွေလိုက်ဆိုပြနိုင်ပေမယ်သမ္ဗုဒ္ဓေစရွတ်တာနဲ့လစ်ပြေးတာပါပဲ၊ပြေးတဲ့နောက်ကလိုက်ရွတ်၊သူကိုယ်ရောင်မဖြောက်ပြေးနိုင်ပါဘူး၊ သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်တစ်နေ့တစ်ထောင်မကရွတ်ရင်နတ်တွေတိမ်ကြားမင်းတွေထက်တောင်ဘုန်းကြီးလာနိုင်ပီးစိတ်ကတောင့်တရင်သူတို့တွေကောင်းကောင်းနေမရပါဘူး၊လိုက်ဖြေစည်းပေးရပါတယ်သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်ဟာနေမင်းကြီးနဲ့တူပါတယ်၊ သဲစုမကဘုရားတွေရှိခိုးရတာကြောင့်အရမ်းအစွမ်းထက်ကြောင်းအနည်းငယ်ဗဟုသုတအနေနဲ့တင်ပြလိုက်ပါတယ်နော် သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာ မြန်မာပြန် (၁) သမ္ဗုဒ္ဓေ အဋ္ဌဝီသဉ္စ၊ ဒွါဒသဉ္စ သဟဿကေ။ ပဉ္စသတ သဟဿာနိ၊ နမာမိ သိရသာမဟံ။ နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူသော ဘုရားရှင်၊ တစ်သောင်းနှစ်ထောင်သောဘုရားရှင်၊ ငါးသိန်းသောဘုရား ရှင် (၅၁၂ဝ၂၈ ဆူသော ဘုရားရှင်)တို့ကို ဦးခေါင်းဖြင့် ရိုသေစွာရှိခိုးပါ၏ ။ (၂) အပ္ပကာ ဝါဠုကာ ဂင်္ဂါ၊ အနန္တာ နိဗ္ဗူတာ ဇိနာ။ တေသံ ဓမ္မဉ္စ သံဃဉ္စ၊ အာဒရေန နမာ မဟံ။ ဂင်္ဂါမြစ်ကမ်းရှိ သဲပွင့်များမှာနည်း၏။ ပရိနိဗ္ဗာန် …